အီကြာကွေး | Colourful Recipes
” အီကြာကွေး – ဂျုံစပ်နည်း ( ပထမနည်း ) “
1. All purpose flour –7oz ( 200 gram )
2. Baking powder –21/2 tsp
3. Oil –3tsp
4. Water – 100 ml ( 2/3 cup )
5. Salt – 1/8 tsp
ကြွေဇလုံထဲကို ဂျုံမှုန့် ထည့် …
baking powder ထည့် ..
ဆီထည့် … ပီးမှ
ရေ ထည့်ပါ ..
မွှေစက်ဖြင့် .. ပထမ .. အနှေးနှုန်း … ၅ မိနစ် .. မွှေပါ ..
မွှေတံမှာ ကပ်နေတဲ့ ဂျုံတွေကို ခွါချ ..
အမြန်နှုန်း ၂ မိနစ် ဂျုံ နှယ်ထားပါ။
” အီကြာကွေး – ဂျုံစပ်နည်း ( ဒုတိယနည်း ) “
Oil –2tablespoons (2tbs ) ထမင်းစားဇွန်း – ၂ ဇွန်း
Salt – 1 teaspoon ( 1 tsp ) လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – ၁ ဇွန်း
Sugar –2tablespoon (2tbs ) ထမင်းစားဇွန်း – ၂ ဇွန်း
Baking Powder –2teaspoons (2tsp ) လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – ၂ ဇွန်း
Yeast – 1 teaspoon ( 1 tsp ) လက်ဘက်ရည်ဇွန်း – ၁ ဇွန်း
ဆီ၊ သကြား၊ baking powder ၊ Yeast ကို ပန်းကန်လုံးထဲ ထည့်ပီး ရေ တခွက်နှင့် ဖျော်ပါ .
(ဂျုံမှုန့် နှင့် ဆား) ထည့်ထားသော ဇလုံထဲသို့ ဖျော်ထားသော အရည်ကို ဖြည်းညင်းစွာ .. နည်းနည်း ချင်းစီ ထည့်ပီး နှယ်သွားပါ …
Yeast အပါ ဂျုံဖြင့် ကြော်ထားသော အီကြာကွေး
ဂျုံများကို နှယ်ပီးတဲ့ အခါမှာ ….
ကြွေဇလုံ အပေါ်ကနေ ရေတစက်မှ မရှိအောင် ညစ်ထားတဲ့ အ၀တ်စို နဲ့အုပ်ပေးထားပါ။
နွေးထွေးသော နေရာမှာ ၂ နာရီလောက် ထားပါ။
( ၂ နာရီလောက် ကြာမှ ) …
ပထမ .. လက်သီး ဆုပ် နဲ့ .. ဘေး ပတ်ပတ်လည်လည်ကို ဖိ .. ဖိ ပေးလိုက်ပါ ..
ပီးရင် .. ပြန့်သွားတဲ့ ဂျုံကို အနားစ ပတ်ပတ်လည် ပြန်စု ..
လက်သီးဆုပ် နှင့် ပတ်ပတ်လည် .. ဖိ လိုက် …
ဂျုံတွေကို ပြန် စု ပေးလိုက် ..
မိနစ် အနည်းငယ် အကြာမှာ …
ဂျုံသား ညက်လာပါလိမ့်မည် …
ဂျုံလိမ့်မယ့် အောက်ခံ အခင်းကို .. ဆီလေး နည်းနည်းလောက် သုပ် …
ဂျုံကို လက် ၂ ဖက် နဲ့ လိမ့် .. လိမ့်ပေး လိုက်ရင် .. ဂျုံ .. က ရှည်ထွက် လာလိမ့်မည် …
လက်ချောင်းလေးတွေ နဲ့ ဖိ .. ဖိ ပေးလိုက်ရင် .. ဂျုံ ပြားသွားမယ် …
ဓါးနဲ့ လက် တဆစ်စာ ဖြတ်ပေးပါ …
ဖြတ်စ ၂ ခု ကို ထပ်လိုက် …
တူ နဲ့ အလယ်ကနေ ဖိ ချ လိုက်ပါ …
အီကြာကွေး တိုတို လိုချင်လို့ .. အလယ်ကနေ တ၀က် .. ၀က်ပါ။
မီးဖိုပေါ်မှာ .. နံပါတ် ၄ နဲ့ ဆီနှစ်ပီး ကြော်လိုက်ပါ ..
ဆီပူ ထဲ ထည့်တဲ့ အခါမှာ …. ထပ်ထားတဲ့ ဂျုံ ကို ဆွဲ .. ဆန့်လိုက်ရင် .. အီကြာကွေး ကြော်မယ့် ဂျုံ ချောင်း … ရှည်လာမယ် ..
ဆီပူထဲမှာ တူ ဖြင့် အီကြာကွေးကို လိမ့် … လိမ့်ပီး မီးမြေးမြေးဖြင့် ဆီနှစ် ကြော်သွားပါ။
ဆီပူထဲမှာ တူဖြင့် အီကြာကွေးကို လိမ့် .. လိမ့်ပီး ကြော်မှ အီကြာကွေးက ပွ သထက် ပွလာပါလိမ့်မယ်။
အီကြာကွေး ( crispy chinese cruller )
By Thet Nandar • Posted in Cooking Ingredients, Fried Recipe, Myanmar Traditional Foods, Traditional Foods	• Tagged အီကြာကွေး, colourful recipes blog, food, Traditional Foods
3 comments on “အီကြာကွေး”
March 24, 2014 @ 6:06 am
thank sar 😀
May 2, 2015 @ 5:15 am